Telefiishanada Madaxa Bannaan Ee Somaliland Oo Baaq U Diray Madaxwayne Biixi – somalilandtoday.com
Telefiishanada Madaxa Bannaan Ee Somaliland Oo Baaq U Diray Madaxwayne Biixi
(SLT-Hargeysa)-Madaxtooyada Somaliland ayaa tan iyo markii uu talada dalka la wareegay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa yaraatay in saxaafadda madaxa bannaan ay kasoo duubto warka iyada oo taas baddelkeedana waxa soo duuba oo warka oo faafreeb lagu sameeyay saxaafadda u soo dirta madaxtooyada.
Shalay oo ugu dambaysay ayay madaxtooyadu u diiday saxaafadda madaxa bannaan in ay soo duubto madaxweyne Muuse Biixi oo furayay shir ku saabsan Istiraatijiyadda waxbarashada Somaliland oo lagu qabtay magaalada Hargaysa.
War murtiyeed ka soo baxay ururka ay ku bahoobeen telefiishanada madaxa banaan ee ka hawl gala magaalada Hargeysa qaarkood waxay ku sheegeen in ay gebi ahaanba joojiyeen baahinta wararka madaxtooyada Somaliland ka soo baxa. Madaxwaynaha Somaliland ayay sidoo kale ugu baaqeen in warbaahinta madax-bannaan ay hesho xaqii ay lahayd – sida uu dhigaayo dastuurka Somaliland iyo xeerka saxaafadduba.
Ugu danbeyntiina guddoomiyaha ururka Saxafiyiinta Somaliland Maxamuud Jaamac Xuuto ayaa sheegay isaguna maalintii shalay in Xukuumaddu baal marayso shuruucda taasoo u oggolaanaysa saxafiga in uu raadsado warka oo aan laga hor istaagin.
Waa markii ugu horeysay ee telefiishanada madax-banaan ee ka hawl gala guddaha Somaliland diidaan baahinta wararka madaxtooyada tan iyo intii uu xilka qabsaday madaxwayne Biixi.